Umthandazo kwiNtombi Enyulu yaseMontserrat yabasetyhini abakhulelweyo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Umthandazo kwiNtombi Enyulu yaseMontserrat kubafazi abakhulelweyo
Ukuhlonelwa yiCawa yamaKatolika yonke el mundo, yayiyicawa enye apho Umthandazo wamaphiko oyintombi kaMontserrat kubafazi abakhulelweyo ukusukela njengomnye wemiboniso ye Intombi enguMariya Uyazi kakuhle ukuba yintoni into yokubonisa amandla ebomini esibelekweni kwaye unakho ukunceda kuyo yonke inkqubo yokutsala.
Umthandazo sisixhobo esinamandla esinokusisebenzisa naphina xa sisifuna ngaphandle kwemeko ethile.
Izibhalo ezingcwele zithembisa imimangaliso emikhulu kwabo bacela ungenelelo lobuThixo.
1 Ngubani iNtombi yaseMontserrat?
1.1 Umthandazo kwiNtombi Enyulu yaseMontserrat kubafazi abakhulelweyo
2 Ngaba le ntombi izakundinceda?
Ngubani iNtombi yaseMontserrat?
Ndiyayazi indlela I-MorenetaUkusukela ukubonakala kwayo encotsheni yentaba, khange kuphele ukubonelela ngemimangaliso kuwo onke amakholwa afuna uncedo lwakho.
Kwakungo-1881 xa Utata uLeo XIII Ndimbhengeza njengomnye wabathengi besi sixeko sedolophu yaseCatalonia kwaye ukusukela ngoko usuku lwabo lubhiyozelwa rhoqo ngo-Epreli 27.
Ngokubonakala kwayo, iinguqulelo ezimbini ziyaziwa, kodwa into eyaziwayo ngokuqinisekileyo kukuba lo ngumfanekiso ovela ezulwini ngenjongo yokuba ukholo lwethu lomelezwe kwakhona sisazi ukuba imimangaliso ikhona kwaye inobuso beNtombi enye uMariya.
Ngoku ekubeni uyayazi iNtombi yaseMontserrat enabafazi abakhulelweyo, masithandaze.
UMariya, mama wothando oluhle, ntombazana entle yaseNazarete, wena ubhengeze ubukhulu beNkosi kwaye, uthi "ewe", uzenze umama woMsindisi wethu nomama wethu: namhlanje thobela imithandazo endiyenzayo kuwe: Ngaphakathi kwam ubomi obutsha buyakhula: omncinci oza kuzisa uvuyo novuyo, iinkxalabo kunye noloyiko, ithemba, ulonwabo ekhayeni lam.
Yinyamekele kwaye uyikhusele ngelixa ndiyithwala esibelekweni sam.
Kwaye ukuba, kumzuzu owonwabisayo wokuzalwa, xa ndeva izandi zabo zokuqala kwaye ndibone izandla zabo ezincinci, ndingabulela kuMdali ngokumangala kwesi sipho Andinike sona.
Ukuba, ngokulandela umzekelo kunye nemodeli yakho, ndingahamba kunye nokubona unyana wam ekhula.
Ndincede kwaye undikhuthaze ukuba ufumane ngaphakathi kum indawo yokukhosela kwaye, ngaxeshanye, indawo yokuqala yokuthatha iindlela zakho.
Kwakhona, mama, jonga ngakumbi kwaba bafazi abajongana nalo mzuzu bodwa, ngaphandle kwenkxaso okanye ngaphandle kothando.
Kwangathi bangava uthando lukaBawo kwaye bafumanise ukuba wonke umntwana oza emhlabeni uyintsikelelo.
Bayeke bathathe isigqibo sokuba ubugqwetha ukwamkela nokukhulisa umntwana kuthathelwa ingqalelo.
Inenekazi lethu loLindile oMnandi, babanike uthando kunye nesibindi.
Ngaba uyawuthanda umthandazo weNtombi yeMontserrat yabafazi abakhulelweyo?
Ngala maxesha apho akhulelwe amaxesha amaninzi imitha izele ziingcinga zentlungu ukuba le nto bayenzayo iyatshintsha paz y ukuthula ekufuneka ubenexesha elinje yile nto kutheni imithandazo inokuba yindawo yokubalekela apho ungaya khona xa kungafiki xesha.
Thandaza kwiNtombi Enyulu yabafazi abakhulelweyo ngoku!
Nanini na xa ecelwa uncedo njengomama olungileyo, uya kuza kwifowuni yethu.
Yiyo loo nto kufuneka ube nokholo olungagungqiyo ukholelwa ukuba siza kulufumana uncedo lwakho ngalo lonke ixesha.
Ayinamsebenzi nokuba kungenxa yethu okanye yomhlobo okanye umntu esazana naye, imithandazo Ihlala inamandla ukuba yenziwe ngokholo nangomphefumlo.
Ndiyathemba ukuba ubathandile abanamandla umthandazo kwiNtombi Enyulu I-Montserrat yabasetyhini abakhulelweyo.
Umthandazo kwiNtombi yaseJuquila
Umthandazo wentombi enguGuadalupe
Gxila kwizifundo kunye nomsebenzi.